Tag: hapana chinhu | Martech Zone
China, January 25, 2007 Chipiri, February 16, 2016 Douglas Karr
Ini handisi mupiro mukuru kuWikipedia. Zvisinei, munguva yakapfuura ndakapa imwe mari kune nheyo uye ndakapa zvinyorwa kune yavo nzvimbo. Ini ndinoda Wikipedia… ndinoishandisa nguva dzese uye ndinozvitarisa kazhinji pablog rangu. Wikipedia yakandibatsira futi - kugadzira mamwe maratidziro ewebsite yangu uye Wikipedia yakavandudza yangu yakazara saiti chinzvimbo kuburikidza nehukama kudzoka kwandiri. Tichifunga izvi maonero, izvi hazvina kupihwa